Ogaden News Agency (ONA) – Wafti kasocda Jaaliyada Ogadeniya ee Manchester oo kaqeybgalay Barnaamijka OYSU Open Day London
Wafti kasocda Jaaliyada Ogadeniya ee Manchester oo kaqeybgalay Barnaamijka OYSU Open Day London
Wafti kasocda Jaaliyada Ogadeniya ee magaalada Manchester ayaa maanta booqasho kusoo maray xafiiska Jaaliyada Ogadeniya ee magaalada London halkaas oo ay u yimaadeen howl shaqo. Waftigan oo ka koobnaa maamulka jaaliyada iyo ururka OYSU ee faraca manchester ayaa markii hore ka qeyb galay barnaamijka Open day ee OYSU London.
Gudomiyaha Jaaliyada Ogadeniya ee Manchester Maxamed Cali ayaa amaan iyo boggaadin usoo jeediyay ururka dhalinyarada. isaga oo aad usoo dhaweeyay barnaamijka Open day. gudomiyaha oo ka hadlaya muuqaladi iyo casharada la xidhiidha opendayga ayaa sheegay in uu ahaa barnaamij waxbadan laga baranayo oo kudayasho mudan. Gudomiyaha ayaa ururka dhalinyarada u rajeyay inay ku guuleystaan howlaha ay wadaan isaga oo sheegay in ururka OYSU mudadii la asaasay waxbadan ay halganka u tareen eegana laga filayo in midaas ka badan ay sii sameeyaan.
Barnaamijka OYSU London Open day ayaa maanta niskii hore xafiiska magaalada ka bilowday iyaga oo dhalinyaro gaadhaysa 27 xubnood la kulmay oo “one to one session” lasameeyay iyaga oo xubinkasta si gooni ah ula hadlay.
Waftiga ka socday Jaaliyada manchester ayaa sidoo kale la kulmay maamulka Jaaliyada Somalida Ogadeniya ee magaalada London iyaga oo shir aan wali la shaacin waxa kasoo baxay ama arrimaha gaarka ah ee labada jaaliyadood kawada hadlayeen aan wali soo bixin.
Balse waxa ay u badantahay howlo dhanka shaqooyinka jaaliyaadka UK ku saabsan in lagu gorfeeynayay. Waftiga ayaa la filaya qeybo kamid ah inay maalmo sii joogi doonaan magaalada London halkaas oo arrimo badan kala shaqeyn doonaan Jaaliyada Ogadeniya ee magaalada London.